ပြည်သူ့ဘက် ရပ်တည်လိုက်တာနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေဆိုးထဲကနေ – Buanchukcho
လွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘာတွေဘယ်လို လွတ်မြောက်သွားမလဲဆိုတာကို ဆက်ဖတ်ပေးပါ။
စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်စစ်သားများ ခုချိန်မှာ ပြည်သူ့ဘက်ကနေ ရပ်တည်မယ်ဆိုရင် အချိန်မီပါသေးတယ်။ ပြည်သူ့ဘက်ကနေ ရပ်တည်နေကြတဲ့ စစ်သားပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော်ခန့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း မမေ့ကြပါနဲ့။
သူတို့တွေ ဘာကြောင့် ပြည်သူ့ဘက်က ရပ်တည်တာလဲ ဆိုရင် အချက် ၃ ချက်ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
(၁)စစ်ကောင်စီတွေရဲ့ မတရားတဲ့လုပ်ရပ်နဲ့စစ်တပ်ကိုချနင်းတဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ်
စစ်အာဏသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ CDM လုပ်ကြတဲ့ စစ်သားတွေ၊ရဲတွေအများကြီးနဲ့ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့မှာ အကြောက်တရားတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပင်မှုတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေထက် သူတို့ ပိုကြောက်တာက မတရားမှုပါလို့ သူတို့ရဲ့ပါးစပ်ကနေ ထုတ်ပြောပါတယ်။
”မလုပ်သင့်တာကို လုပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကို အသုံးချတာ၊ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့ အပေါ် မတရားလုပ်တယ်ဗျာ၊ စစ်အာဏာရှင်ကို မကြိုက်ဘူး ပြောတဲ့ပြည်သူ့အပေါ် မတရားလုပ်တယ် ခင်ဗျာ၊ ပြီးတော့ စစ်တပ်ဆိုတာ ပြည်သူကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် သစ္စာဆိုပြီးတည်ထောင်ထားရတာ အဲဒါကို စစ်ခေါင်းဆောင်တစ်စုအတွက် အာဏာကို အလွှဲသုံးစားလုပ်ပြီး ပြည်သူ့စစ်တပ်ပါလို့ ပြောပြီး ပြည်သူ့ကို ပြန်သတ်ခိုင်းတာ လက်မခံနိုင်ဘူး၊ ကိုယ့်ညီသားအရွယ်ကလေးတွေကို စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်နဲ့ကိုယ့်လုပ်ရပ်မမှန်ဘဲနဲ့ မသတ်နိုင်ဘူး”
(၂) ပြည်သူ့အမုန်းနဲ့ပြည်သူ့သစ္စာစူးမဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြလို့ပါ။
ပြည်သူတွေက စစ်သားနဲ့ရဲ ဈေးမရောင်းပါ ဆိုတာက တော်တော်လေး ထိရောက်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေက ငါတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို လက်မခံပါလား၊ ငါတို့ကို မုန်းတယ် ဆိုတဲ့ အသိဟာ သူတို့ မိသားစုတွေကို စစ်တပ်တွေထဲကနေ အပြင် မထွက်စေတော့ပါဘူး။
နောင်ချိုလို မြို့ငယ်လေးမှာတောင် စစ်တပ်က ၄ တပ်ရှိတယ်။ အဲဒီ တပ်၄ တပ်ထဲက တပ်မိသားစုတွေဟာ ဈေးနေ့ဆိုရင် နောင်ချိုမြို့ပေါ်တက်ပြီး ဈေးဝယ်ကြတယ်။ ခု မဝယ်ရဲကြဘူး။ စစ်ယူနီဖောင်းတွေနဲ့ အပြင် မထွက်ရဲကြဘူး။ တပ်မိသားစုတွေဟာ နောင်ချိုမြို့ပေါ်က အထက ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းတက်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်း ဖွင့်နေတုန်းက စစ်သားသားသမီးတွေ ကျောင်းလားမတက်ရဲကြဘူး။ တပ်ထဲမှာပဲ စာကို ကျိတ်သင်ကြတယ်။
စကစရဲဘောများ ပြည်သူ့ဘက်ကနေ မရပ်ချင်ဘူး ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရှင်တို့နဲ့ ရှင်တို့မိသားစုတွေ စစ်တပ်ထဲမှာပဲ တစ်သက်လုံး နေနိုင်မှာလား ဆိုတာ စဉ်းစားကြပါ။ တပ်ထဲကနေ တပ်ပြင်မထွက်ဝံ့ဘဲ နေနိုင်မှာလား ၊ ကိုယ့်သားသမီးကိုယ်လည်း မေးကြည့်ပါ။ တပ်ထဲမှာပဲ လင်ယူသားမွေးလုပ်ပြီး နေမှာလားဆိုတာကို စဉ်းစားကြပါ။
စကစဝင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကတော့ သူတို့အတွက် စစ်သားတွေကို. ပြည်သူတွေနဲ့ လှည့်တိုက်ပေးနေပေမဲ့ သူတို့ကတော့ ဘယ်လိုနေမယ်ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းရှိထားပြီးသားပါ၊စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ သားသမီးတွေကတော့ နဂိုကတည်းက တပ်ထဲမှာ မနေတဲ့ သူတွေမို့ သာမန်အဆင့်လောက်ရှိတဲ့ ရဲဘောတွေ ဗိုလ်ကြီးတွေ ဗိုလ်မှူးတွေ အတွက် ထည့်ကို မစဉ်းစားကြပါဘူး။
ဒီတိုက်ပွဲမှာ ပြည်သူ့ဘက်ကနေ မရပ်တည်တဲ့သူတိုင်းကို ပြည်သူက မုန်းပါတယ်။ စစ်သားမှ မဟုတ်ဘူး၊ ပြည်သူ့ဘက်က မရပ်တည်တဲ့ ဝန်ထမ်းတိုင်းကို ပြည်သူ မုန်းတယ်ဆိုတာ မယုံမရှိပါနဲ့။
ပြည်သူရဲ့ အမုန်းက ကိုယ်တင်မက၊ မိသားစုဝင်တွေ၊သားသမီးတွေ မြေးမြစ်တွေထိ အမုန်းတွေရဲ့အင်အားဟာ ကြီးမားလှပါတယ်။ ငါ့ သားသမီးဟာ ဘာမှ မလုပ်ဘဲနဲ့ လူတွေက မုန်းမှာလား လို့ မတွေးပါနဲ့ ငါ့သားသမီးဟာ ဘာမှ မလုပ်ပေမဲ့ ငါက ပြည်သူ့ဘက်က မရပ်တည်ဘဲနဲ့ ပြည်သူ့ကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့အတွက် မုန်းတယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။
ခုချိန်မှာ စကစအဖွဲ့ဝင် ရဲတွေ စခတွေ သေဆုံးတဲ့ သတင်းပို့စ်တွေရဲ့ ကော်မန့်တွေကို ဖတ်ကြည့်ရင် မြင်သာ တွေ့သာပါတယ်။ ပြည်သူ့ဘက်က မရပ်တည်လို့ သေတာတောင်မှ ပြည်သူတွေပျော်ကြတာ ပြည်သူတွေဟာ မေတ္တာမဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်သက်လုံး ပြည်သူကျွေးတာစားပြီး နေလာတာ အရေးအကြောင်းရှိလာချိန်မှာ ပြည်သူ့ကို သစ္စာဖောက်ပြီး စစ်အာဏာရှင်ဘက်ကို ရပ်တည်နေလို့ နာကျင်မှုကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ပြည်သူ့ဒေါသပါ။ ခုချိန်မှာ ပြည်သူ့စစ်သား လုပ်မယ်ဆိုရင် အချိန်မီပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ မပေးချင်ပေမဲ့ ပေးရပါ့မယ်၊ဂဋ္ဌုန်ဦးစောကို မုန်းတဲ့ အမုန်းဟာ ဘေဘီစောရဲ့မြေးထိ သွားခဲ့ပါတယ်။ဦးနေဝင်းကို မုန်းနဲ့အမုန်းဟာ အေးနေဝင်းထိ ရောက်သွားပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေကို မုန်းတဲ့ အမုန်းဟာ နေရွှေသွေးအောင်ထိ ရောက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်းစစ်သားတွေ ပြည်သူ့ဘက်ရောက်ပြီး CDM လုပ်ကြသူတွေ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးပွားလာတဲ့ သတင်းတွေများလာတာကပါ။
(၃) စစ်တပ်ထဲကနေ ထွက်ချင်လို့ ဒါကို အခွင့်ကောင်းအနေနဲ့ အသုံးချတာပါ။
စစ်တပ်ထဲကို ဝင်သွားပြီး သေမှ ထွက်ခွင့်ရသလို၊ စစ်ပြေးအဖြစ် စစ်ထောင်ကျခံရင်တောင်မှ မသေချာတဲ့ အတွက် ခုလို အချိန်မှာ သေနတ်ယူပြီး ထွက်လိုက်ရင် ပြည်သူ့စစ်သားအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ကယ်တင်နိုင်မယ်။ မိသားစုလည်း အမုန်း ခံရစရာမရှိတော့ဘူး။ ပြီးတော့ သိန်း ၅၀ လည်း ရရှိပြီး မိသားစုနဲ့အတူ ကောင်းကောင်း နေနိုင်မယ်။ အဲဒီအချက်ကို အသုံးချဖို့ အတွက် စစ်တပ်ကနေ ထွက်ပြေးပြီး CDM လုပ်တာပါ။ ဉာဏ်ကောင်းကြပါတယ်။
စစ်တပ်ကနေ ထွက်ပြေးပြီး CDM လုပ်မယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်ရမဲ့ အဖွဲ့အစည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့စည်း အကြောင်းကို ကြိုတင်လေ့လာထားလို့ရပါတယ်။
လုံခြုံရေးအရနှင့် ကိုဗစ်ကြောင့် အပြင်မထွက်နိုင်သေးဘဲ တပ်တွင်းမှာပင်ရှိနေသေးပြီး CDM ပြုလုပ်လိုတဲ့ စစ်သည်၊ အရာရှိများအနေနှင့် ပြည်သူ့ရင်ခွင့်အဖွဲ့ထံသို့ ဆက်သွယ်၍ INUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အသိအမှတ်ပြု Pre-CDM ကုတ်များရယူနိုင်ကြောင်း ထိုအဖွဲ့က ကြေညာထားပါတယ်။
Pre-CDM ကုတ်ထုတ်ယူလိုသည့် တပ်တွင်းနေသူများသည် ပြည်သူ့ရင်ခွင်အဖွဲ့ထံ @MyanmarPeople Telegram http://t.me/MyanmarPeople မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပြီး စိစစ်သည့်နည်းလမ်းများအတိုင်း သဘောတူလိုက်ပါဆောင်ရွက်ကာ ကုဒ်များရယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့က ဖော်ပြထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
လက်ရှိ သတင်းတွေအရ NUGကသာ ကြားကားလမှာ လုံခြုံရေးကူညီပေးမယ်ဆိုရင် တစ်လအတွင်းမှာ CDM လုပ်ကြမဲ့ စစ်သား ၅၀၀ ခန့်ရှိနေတယ်လို့ ပြည်သူ့စစ်သားကဏ္ဍက ယနေ့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြည်သူ့စစ်သားကဏ္ဍဟာ CDM ပြုလုပ်ထားတဲ့ စစ်တပ်မှ အရာရှိများ၊ စစ်သားများပြုလုပ်ထားပြီး CDM ပြုလုပ်သူ၎င်းတို့အတွက် INUG နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ အကူအညီပေးခြင်းများလုပ်ဆောင်နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်သားတွေ CDM လုပ်ပြီး ပြည်သူကဘက် ရပ်တည်ခြင်းဟာ သွေးမြေကျမှုအနည်းဆုံးနဲ့ အောင်ပွဲရမည့်နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့
ပြည်သူ့စစ်သားအဖြစ် ရပ်တည်ချက် ပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေဆိုးတွေထဲကနေ လွတ်မြောက်သွားပြီး. ပြည်သူ့ စစ်သားအနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ မေတ္တာနဲ့ သိန်း ၅၀လည်း ရရှိပါလိမ့်မယ်။ မိသားစုဝင်တွေကိုလည်း ကယ်တင်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မိဘတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်မိဘနဲ့ဘယ်မိသားစုကမှ ပြည်သူ့သစ္စာဖောက်စစ်သားအဖြစ် ဂုဏ်မယူနိုင်ကြပါဘူး။
မည်သူ့ကိုမဆို ကော်ပီ ကူးယူခွင့်ပြုပါတယ်။ လူများများသိအောင်သာ လုပ်ပေးကြပါ။ စစ်သားတွေဆီကိုရောက်စေချင်လို့ပါနော်။ ကော်ပီ ပြန်တင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကျမအမည်ကို ခရစ်ဒစ်မပေးလည်း ရပါတယ်။
ဘေးကင်းကျန်းမာ၍ လိုရာပန်းတိုင်ကို အမြန်ဆုံးရောက်ကြပါစေ။
ဒီတစ်ခါတော့ ရမယ်မထင်နဲ့ မင်းအောင်လှိုင်ရေ။ အခု့ပြည်သူတွေက စောက်ချဥ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်